(WAR)-31/12/2021-Jimco-AminaWehelie.Me- Tobonnaano kun oo qof oo macmiil la ah bangiga Santander iyo baanan kaleba, ayaa dhowaan ku soo toosay, lacag aaneey fileyn oo ku jirta qasnadahooda, ka dib markii bangiga Santander uu si aan ula kac ahayn, ugu qeybiyey lacago.
75,000 oo qasnadood ayuu bangigu ku xawilay adduun gaaraya 130 milyan oo Geniga Istarliinka ah (Pounds), 25-kii bishaan Disember.
Santander ayaa iminka shaqaalihiisu ku howshoon yihiin, sideey lacagahaan sida qaldan uga baxay u soo celin lahaayeen, waxaana hawshooda sii adkeeyey, ka dib markii ay qasnadaha qaarkood ay lacagta ku shubeen noqdeen, kuwo ka furan baanan kale oo uu tartan kala dhaxeeyo Santander.
Qaladkan ayaa yimid ka dib markii 2000 oo qasnadood oo kuwa beecmushtarka ahi laga xawilay lacago laba jeer midkiiba.
Bankiga ayaa u kala diray macaamiishiisa fariimo uu ugu sheegayo in qalad dhacay.
Shaqaalaha qaarkood ayaa u sheegay warbaahinta, in fasaxoodii ciidda masiixiga uu ka khasaaray, ka dib markeey ay ku qasbanaadeen, in eey shaqeeyaan oo dib u soo celiyaan qidmooyinkaas qaldamay.
Previous Xirashada waji-daboolka oo dib loo soo celiyey:
Next Mogadishu: A suicide bomber targeted Somalia government spokesman